Dadka reer London hadda waxay aad ugu dhow yihiin inay isticmaalaan wakiilada safarka marka loo eego ka hor inta aan cudurka faafa ahayn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dadka reer London hadda waxay aad ugu dhow yihiin inay isticmaalaan wakiilada safarka marka loo eego ka hor inta aan cudurka faafa ahayn
Wakiilada socdaalku waxay ahaayeen geesiyaasha aan la heesin ee masiibada ah - waxay shaqaynayeen bilo dhamaadka mushahar la'aan, dib u balaarin, lacag celin iyo dib u habeynta ciidaha riyada ee dadka.
Jahwareerka ku saabsan isbeddelka joogtada ah ee xeerarka safarka ee COVID-ku-xiran ayaa ku riixaya fasax-bixiyeyaasha qaybo ka mid ah dalka si ay ula xiriiraan wakiillada safarka oo si sax ah ula talin kara, halkii ay khatar gelin lahaayeen inay ku qaldamaan ballan-qaadka DIY, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris uu sii daayay maanta (Isniin 1 November) by WTM London .
Dadka reer London ayaa ah kuwa ugu badan ee u jeesta xirfadlayaasha safarka, iyadoo in ka badan hal shantiiba ay sheegeen inay isticmaali doonaan wakiil hadda ka dib, ayaa daaha ka qaaday Warbixinta Warshadaha WTM ee lagu soo bandhigay WTM London, oo ah hormuudka munaasabadda caalamiga ah ee warshadaha safarka, oo ka dhacaya muddada dheer saddexda maalmood ee soo socda (Isniin 1- Arbaco 3 November) ee ExCeL – London.
Markii la weydiiyay: Jahwareerka ku hareeraysan safarka ee uu sababay masiibada ma ka dhigtay inaad u badan tahay inaad ballansato fasax mustaqbalka adiga oo isticmaalaya wakiilka safarka? 22% dadka reer London ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin inay sidaas sameeyaan, waxaana ku xiga 18% Scotland iyo Wales.
Dhanka kale, 12% jawaab bixiyaasha Yorkshire iyo Humberside iyo 13% ka yimid Waqooyi Bari iyo Koonfur Bari (ka baxsan London) ayaa sheegay inay aad ugu badan yihiin isticmaalka wakiilka safarka, ayaa daaha ka qaaday warbixinta 1,000 macaamiisha UK.
Dadka da'doodu ka yar tahay 44 sano waxay aad ugu dhowdahay inay ballan la qabsadaan wakiilka tan iyo markii ay dhibaatadu ka bilaabatay COVID, iyadoo 20% 18-21 jir ah; 21% ee 22-24s iyo 22% ee 35-44s iyagoo sheegaya inay waydiisanayaan wakiil.
Tani waxay la mid tahay 13% ee 45-54s, 12% ee 55-64s iyo 14% ee ka weyn 65s kuwaas oo sheegay inay hadda aad ugu dhowdahay inay ballan la qaataan wakiilka safarka tan iyo ka hor cudurka faafa.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: "Natiijooyinka cilmi-baarista ayaa war wanaagsan u ah wakiilada safarka. WTM London waxa ay sheegtay in muddo ah in wakiilada socdaalku ay halkan u joogaan inay sii joogaan.
"Wakiilada safaradu waxay ahaayeen geesiyaasha aan la heesin ee masiibada ah - waxay shaqeynayeen bilo dhamaadka mushahar la'aan, dib u balaarin, lacag celin iyo dib u habeynta ciidaha riyada ee dadka.
"Waxay sidoo kale ku qasbanaadeen inay sii wadaan shuruucda isbeddelka joogtada ah - ma aha oo kaliya dalalka ku jira, ama ku jira liiska cagaarka, amber ama casaanka, laakiin sidoo kale haddii dalalkaas ay dhab ahaantii u furan yihiin dadka soo booqda UK iyo haddii ay joogaan. Xafiiska Barwaaqa Sooranka iyo Horumarinta Dibadda (FCDO) ee liiska meelaha 'ammaan' ah.
"Intaa waxaa dheer, wakiiladu waa inay la socdaan xeerarka ku saabsan tijaabooyinka COVID iyo shuruudaha gelitaanka dalal gaar ah. La yaab ma leh wakiiladu inay noo sheegaan dhammaan inay u shaqeeyaan si ka sii adag sidii hore.
"Wakiilo badan ayaa sidoo kale la macaamilay codsiyada dadka aan iyaga la qabsan - kuwaas oo si toos ah uga ballansan shirkad ay markii dambe awoodi waayeen inay qabtaan markii ay wax qaldameen, ama ay sameeyeen ballan DIY ah oo ay noqdeen kuwo aan lagu dhejin.
"Xaqiiqda ah in dadku ay fahmaan oo ay qiimeeyaan qiimaha wakiilada waa wax weyn in la arko."
Dadka reer London hadda waxay aad ugu dhow yihiin inay isticmaalaan wakiilada safarka marka loo eego ka hor masiibada - YouLead NewsHub wuxuu leeyahay,
Nofeembar 21, 2021 at 10: 43
Halkani oo dhammaystiran […]